MediaLight Mk2 24 Volt 5 iyo 10 Meter (Ma ahan USB-ku habboon) - MediaLight Eex Nalalka
Bogga ugu weyn MediaLight Mk2 24 Volt 5 iyo 10 Meter (Ma ahan USB ku habboon)
MediaLight Mk2 24 Volt 5 iyo 10 Meter (Ma ahan USB ku habboon)
by Nalalka MediaLight Eexda
Keydso ilaa $ 0.00 Save $ -109.95
Qiimaha asalka ah $ 109.95 - Qiimaha asalka ah $ 179.95
$ 109.95 - $ 179.95
Qiimaha hadda $ 109.95
wax soo saarka.waydayaasha.hoose_variant 5 Mitir - $ 109.95 10 Mitir - $ 179.95
Mitirka 5 Mitirka 10 Length
MediaLight Mk2 24 Volt waxaa ka mid ah:
MediaLight Mk2 24 Volt xarig
24v dimmer iyo fog
24v Quwada Korantada
3 Dammaanad Sanadeed (Waqtigeena dammaanad qaadku wuu ka gaaban yahay LED-yada awoodda sare leh)
Badeecadani waxay u baahan tahay AC 110v ama 220v awood. Looma qorsheynin in lagu shido USB.
Badeecadaha MediaLight badankood waxaa loo dhisay inay ku shaqeeyaan USB 2.0 (illaa 4 mitir) iyo awood 3.0 (ka sareysa 4 mitir). Tani waxay xaddideysaa dhalaalka ugu sarreeya illaa 300 lm dhererka dhererka oo dhan. Xaddidaadda kale ee 5v waa dhererka xargaha. MediaLight Mk2 Flex 6m ayaa ah midka kaliya ee ugu dheer, halbeegga USB-ku shaqeeya ee la heli karo.
Tani way ka badan tahay ku filnaanshaha nacaybka dhammaan laakiin xaaladaha ugu daran (bandhigyo ballaaran, darbiyada mugdiga ah).
Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay xarig cad oo dhalaalaya oo dherer dheer ah sababo kala duwan (rakibidda dhismaha, mashaariicda DIY, iftiinka lahjadda, iwm.)
Nalalka xagjirka ah, waxaad had iyo jeer ka fiican tahay inaad iibsato mid ka mid ah cutubkeena 5v marka loo eego cutubkan. Si kastaba ha noqotee, 24v waxaa loo heli karaa xaaladaha loogu baahan yahay awood dheeri ah.
MediaLight Mk2 24 Volt wuxuu bixiyaa ku dhowaad 600 lumens halkii mitir.